बेमौसमी मकैखेतीबाट मनग्य आम्दानी कसरी ? | Diyopost
बेमौसमी मकैखेतीबाट मनग्य आम्दानी कसरी ?
मा प्रकाशित 67 पटक हेरिएको
परासी,चैत २८ । पश्चिम नवलपरासीको धनेवाका किसानले बैमौसमी ‘हाइब्रिड’ जातको मकै खेती गरेर मनग्ये आम्दानी गर्न थालेका छन् । हिउँदे मौसममा लगाइने हाइब्रिड मकैबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि यहाँका अधिकांश किसान हिउँदे मकै खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
वडास्तरीय कृषक सञ्जालका अध्यक्ष समेत रहेका पन्थ मकैखेतीतर्फ उत्कृष्ट किसान घोषित हुँदै गत वर्ष विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा नेपालमै दोस्रो पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । साविक जहदा गाविसले पनि उहाँलाई उत्कृष्ट कृषकको रुपमा सम्मान गरेको थियो ।
नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपालन पकेट क्षेत्र घोषित क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गरेर सोहीअनुसार योजना सञ्चालन गरिएको उनले बताए । गत वर्ष नगरपालिकाले पकेट क्षेत्रका कृषकका लागि चार क्विन्टल मकैको बीउ अनुदान दिएको र आगामी वर्ष निरन्तरता दिँदै जानेसमेत उनले जानकारी दिए । त्यस क्षेत्रका किसानलाई श्रेष्ठा जात र पायोनियर ३२९६ जातका मकैको बीउ नगरपालिकाले अनुदानमा उपलब्ध गराएको नगरपालिकाका कृषि अधिकृत अब्दुल जलिलले जानकारी दिए ।रासस